Finch, ane nyeredzi Tom Hanks kutanga kuratidzwa munaNovember 5 | Ndinobva mac
Finch ane nyeredzi Tom Hanks kutanga kuratidzwa munaNovember 5
Yasvika nguva yekukuudza kuti iyo yekutanga firimu iyo ichave iri paApple TV + uye ina Tom Hanks semutambi mukuru, Ichaburitswa kupera kwegore rino. Iyi firimu, Finch, inotaurira nyaya yeinjiniya ye robhoti uye mumwe wevashoma vakapona yechiitiko chezuva chakasiya nyika yasiyiwa.
Muna Chivabvu wegore rinoTakakuudza kuti Apple yakahwina sei kodzero dzekugona kuratidzira iyo firimu inotarisa Oscar-anokunda Tom Hanks kune vese vashandisi veApple TV +. Iyi firimu, Finch, inotiudza nezve zviitiko zve mhuri isinganzwisisike. Iko mainjiniya erobhoti uye mumwe wevashoma vakapona yechiitiko chezuva chakasiya nyika yasiyiwa, anogara nerobhoti nembwa yake Goodyear.
Yakasimba uye inofadza inonakidza yekutsvaga murume kuti ave nechokwadi chekuti mudiwa wake canine shamwari ichatarisirwa mushure mekunge aenda. Finch anga achigara munzvimbo yepasi pevhu kwemakore gumi, akavaka nyika yake yaanogovana nembwa yake, Goodyear. Gadzira robhoti, inoridzwa naJones, kuti urambe uchitarisa Goodyear kana asisakwanise. Sezvo vatatu ava vanotora rwendo rune njodzi kuenda kuAmerican West dongo, Finch anotambudzika kuratidza zvisikwa zvake, anozviti Jeff, mufaro uye kushamisika kuti zvinorevei kurarama. Rwendo rwake rwemugwagwa rwakagadzirwa nedambudziko uye kuseka, sezvo zvakangoomera Finch kuuraya Jeff naGoodyear kuti vagarisane sezvazviri kwaari kubata njodzi dzenyika nyowani.
Mushure mekumirira kwenguva refu, pane zvishoma kuti uone nyaya kuburikidza neterevhizheni dzimba dzedu chero bedzi takanyorera kuApple TV + kana tichiri kunakidzwa nenguva yedu yemahara iyo Apple yatipa. Finch ari kuuya kuApple TV + gare gare gore rino, Mbudzi 5.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Finch ane nyeredzi Tom Hanks kutanga kuratidzwa munaNovember 5
Discount inosvika ku € 104 yekutenga kweMac mini ine M1 processor